काठमाडौं– कोरोना संक्रमित शिव अर्याल १५ दिनअघि एभरेस्ट अस्पताल भर्ना भएका थिए । १४ दिने अस्पताल बसाइमा उनको ९ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि आईसीयूमा १३ दिन बसेका उनीसँग अस्पतालले भर्ना हुनुपूर्व नै ५ लाख रुपैयाँ धरौटी असुलेको थियो ।
कोरोना जितेर घर फर्किए पनि अर्यालको मन खिन्न छ । एकातिर अस्पतालको मनोमानी अर्कोतिर सरकारको गैरजिम्मेवार रवैया । सरकारबाट नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा नपाइरहेकै बेला निजी अस्पताल महँगो शुल्क असुलिरहेका छन् । यस्तोमा संक्रमणबाट सामान्य आयस्तर भएका बिरामी मर्नुबाहेक कुनै विकल्प नरहेको अर्याल बताउँछन् ।
‘मैले भर्ना हुनकै लागि उपचारपूर्व ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुप¥यो । मैले पैसा तिर्न सकेँ र म बाँचेँ,’ अर्याल भन्छन्, ‘हामीजस्तो अलिकति चिनिएको मानिससमेत यस्तो अवस्था भोग्न विवश छौं भने सामान्य नागरिकले कोरोना लागेको खण्डमा कसरी त्यत्रो पैसा तिर्ने ?’
अस्पतालका आइसोलेसन बेड महँगो भएकाले कोरोना संक्रमितमाथि आर्थिक भार थपिएको छ। निजी अस्पतालमा मात्र होइन सरकारी अस्पतालमा समेत संक्रमित धेरै रकम तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन्।
कोरोनासँगै यस्तै आर्थिक व्यथा छ, सीता घिमिरेसँग पनि । १५ दिनअघि कोरोना संक्रमित भएपछि उनी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना भइन् । १४ दिने अस्पताल बसाइमा सीताको ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।
त्यसो त घिमिरे संक्रमण भएलगत्तै निजी अस्पताल नपुगेकी भने होइनन् । काठमाडौंका निजी अस्पतालले भर्नापूर्व नै १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने सर्त तेस्र्याएपछि उनी टेकु अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् ।
‘निजीमा महँगो भएर सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएँँ, बरु घरमै बस्नुपर्ने रहेछ,’ घिमिरे भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न डाक्टरहरू नै नआउँदा रहेछन् । समस्या आउनेबित्तिकै डाक्टर बोलाउँदा पनि नआउने ।’
सरकारी अस्पतालमा एउटा आइसोलेसन बेडका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक तिर्नुपर्छ ।
बिरामीको परीक्षण तथा औषधि खर्च यहि ३५ सय रुपैयाँको प्याकेजबाट उपचार हुने टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारी बताउँछन् । ‘सरकारले निःशुुल्क वितरण गरिरहेको औषधिको पैसा लाग्दैन । अन्य औषधि आवश्यक परेको अवस्थामा किनुुपर्ने हुुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
अस्पतालकै कर्मचारीको ज्यान गयो
अहिले घरमै बसिरहेका संक्रमितमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिए अस्पतालमा आईसीयू भेन्टिलेटरसहितको उपचार पाउन निकै मुस्किल छ । पहुँच र पैसा नहुनेका लागि त त्यस्ता सुविधासहितको उपचार लगभग असम्भव जस्तै भएको ज्वलन्त उदाहरण हो, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका एक कर्मचारीले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु ।
धादिङका राजाराम इटनी २५ वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लेखा अधिकृत थिए । केही दिनदेखि ज्वरो लगायतका समस्या देखिएपछि उनी घरमै आराम गरिरहेका थिए । १७ कात्तिक राति उनलाई एक्कासि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो । देशकै एक सुविधासम्पन्न मानिएको शिक्षण अस्पतालका कर्मचारीलाई अन्त लैजाने कुरै भएन । परिवारका सदस्यले सिधै शिक्षण अस्पताल पु¥याए ।
इटनीको शरीरमा अक्सिजन लेबल निकै कम थियो । बेहोस अवस्थामा अस्पताल पु¥याइएको थियो । ड्युटीमा रहेका चिकित्सकले भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू चाहिने बताए । तर अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू खाली नभएको जानकारी दिइयो ।
परिवारका सदस्यले उपत्यकाका धेरै अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू भए–नभएको बुझे । केही घण्टाको प्रयासपछि बुढानीलकण्ठस्थित करुणा अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू पाइयो। हतार–हतार त्यहाँ पु¥याएर उपचार गर्दा इटनीलाई बचाउन सकिएन । १९ कात्तिक बिहान करिब ६ बजेतिर उनको निधन भयो । शिक्षण अस्पतालमै २५ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीले त यसरी अस्पतालमा बेड नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्छ भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला ?
निजी अस्पतालको मनोमानी
कोरोना संक्रमितको उपचारबाट सरकारले हात उठाएपछि निजी अस्पतालले यसलाई व्यापारको राम्रो अवसर बनाएका छन् । संक्रमितको उपचार खर्च निजी अस्पतालपिच्छे फरकफरक छ । निजी अस्पतालले एउटा आइसोलेसन बेडका लागि दैनिक १७ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । अन्य टेस्ट तथा औषधि खर्च त कति हो कति ।
व्यापारसँगै निजी अस्पतालले ठगी धन्दा पनि थालेका छन् । निमोनियाँ भएका बिरामीलाई ‘कोरोना संक्रमण’ भनेर ग्रान्डी अस्पतालले १८ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको छ । १८ दिन अस्पताल राखेर १८ लाख रुपैयाँ बुुझाएर पनि पुुष्कर दियाली बाँचेनन् । ‘ग्रान्डीले उपचारका लागि भन्दै पैसा लिइरह्यो, तर एकदिन पनि बिरामीका आफन्तलाई भेट्न दिएन,’ पुुष्करका आफन्त राज सुुनार भन्छन् ।
कोरोनाको जोखिम बढेसँगै अस्पतालले उपचार खर्च बढाउँदा कतिपय कोरोना संक्रमित उपचार नगराई घरैमा बस्न थालेका छन् । अस्पताल बस्नुपर्ने संक्रमितसमेत खर्च अभावमा घरमै बस्दा अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, यसले समुदायमा कोरोना फैलिने जोखिम बढिरहेको स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् । पछिल्लो समय अस्पतालले संक्रमितसँग धरौटी रकम लिन थालेपछि त समुदायमा कोरोना त्रास झन् फैलिएको छ ।
उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पताल संक्रमितले भरिइसकेका छन् । सरकारी अस्पतालमा उचित हेरचाह हुँदैन । निजी अस्पताल महँगो शुल्क असुल्छन् । बाध्य भएर घरमै आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितको मृत्युको संख्या पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ । विडम्बना, सरकारीस्तरबाट भने उपचारका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन ।
‘सरकारले अन्य खर्च कटौती गरेर भए पनि कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारमा लाग्ने खर्च बेहोरेर जनमुखी बन्नुपर्ने बेला हो,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र समीर भन्छन्, ‘सरकारको क्षमताले भ्याएन, जनता आफैंले खर्च गर भन्नु लाजमर्दो हो, महामारीमा सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र होइन, उच्च तहका दीर्घरोगी नेता तथा नेताका परिवारका उपचारमा करोडौं खर्च जुटाउन सरकारलाई कुनै समस्या हुँदैन । विभिन्न बहाना बनाएर भए पनि सरकारले खर्च व्यहोर्ने गर्छ । मन्त्री, नेताको उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्स बोलाएर सिंगापुरदेखि अमेरिकासम्म लैजान राज्य पछि पर्दैन । तर महामारीमा निमुखा जनताको उपचारका लागि सरकारसँग बजेट हुँदैन ।
के यही हो, सामाजिक न्याय र लोक कल्याणकारी राज्यको चरित्र ?